Real Madrid oo u soo bandhigtay Tottenham labo xiddig si ay qeyb kaga noqdaan heshiiska ay kaga dooneyso Eriksen – Gool FM
(Madrid) 22 Okt 2019. Kooxda Real Madrid ayaa u soo bandhigtay dhigeeda Tottenham Hotspur magacyada labo ka mid ah xiddigaheeda si ay kaga qaadato Christian Eriksen, suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aaddan.
Real Madrid ayaa miiska u soo saartay kooxda Tottenham Hotspur xiddigaha Francisco Isco iyo Mariano Díaz, si ay qeyb kaga noqdaan heshiiska ay kaga doonayaan xiddiga reer Denmark ee Christian Eriksen bisha Janaayo ee soo aaddan.
Los Blancos ayaa wali ah kooxda ugu cad cad ee ku guuleysan karta inay gacanta ku dhigto heshiiska Christian Eriksen bisha Janaayo ee bilowga sanadka cusub 2020.
27 jirkan reer Denmark ayaa si weyn loola xiriirinayay inuu ku biirayo dhowr kooxood ee ka mid ah kuwa ugu waa weyn qaarada Yurub suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, waxaana ka mid ah kooxaha isku dayay inay la siixiixdaan Paris St Germain iyo Juventus.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu dhankiisa xaqiijiyay in Real Madrid ay dooneyso inay ka takhalusto qaar ka mid ah xiddigaheeda, si ay kaga hortagto dhibaato kaga timaada buuxdhaafka boosaska kala duwan ee kooxda.
Weeraryahan Mariano Diaz ayaan wax boos ah ka helin kooxda Real Madrid xilli ciyaareedkan, halka ciyaaryahanka khadka dhexe Isco uu wali u dagaalamayo inuu ku guuleysto kalsoonida Zinedine Zidane, taas oo aan wali dhicin tan iyo soo laabashada macallinka reer France xilli ciyaareedkii hore.